1 Corintios 5 CST - Korintofo I 5 NA-TWI | Biblica
1 Corintios 5 CST - Korintofo I 5 NA-TWI
Korintofo I 5
1Nnansa yi, wɔkeka se aguaman a morebɔ wɔ asafo no mu no yɛ hu a abosonsomfo mpo renyɛ saa. Mate mpo sɛ obi afa n’agya yere. 2 Na ɛbɛyɛ dɛn na moatumi ahoahoa mo ho? Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ mo werɛ how wɔ ho na mompam saa onipa no mfi mo mu.
3 Ɛwom, me de, me ne mo ntam kwan ware nanso mewɔ mo nkyɛn honhom mu. Yɛn Awurade Yesu din mu, mabu onipa a ɔyɛɛ afide yi atɛn dedaw te sɛ nea mewɔ mo nkyɛn ara pɛ. 4 Muhyia na meka mo ho wɔ honhom mu a, Awurade Yesu tumi a ɛka yɛn ho no nti, 5 ɛsɛ sɛ mode saa onipa no ma ɔbonsam na ɔsɛe ne nipadua no na Awurade da no du a, wagye ne honhom nkwa.
6 Ɛnsɛ sɛ mohoahoa mo ho. Munim sɛ, ‘mmɔkaw kakraa bi na ɛma mmɔre no tu.’ 7 Ɛsɛ sɛ muyi saa bɔne mmɔkaw dedaw yi fi mo mu na moayɛ kronn. Ɛba saa a, mobɛyɛ sɛ mmɔre foforo a mmɔkaw nni mu sɛnea minim mo sɛ mote dedaw no. Afei a wɔde Kristo a ɔyɛ yɛn Twam Guammaa no abɔ afɔre no, yɛn Twam Afahyɛ no adu so. 8 Eyi nti, mommma yɛmmfa mmɔkaw dedaw a ɛyɛ bɔne no nnni afahyɛ no na mmom yɛmfa abodoo a mmɔkaw nni mu na ɛyɛ kronn no na enni afahyɛ no.
9 Krataa a mekyerɛw mo no, mekaa wɔ mu se mommfa mo ho mmmɔ aguamammɔfo ho. 10 Menkyerɛ abosonsomfo a wonye anaa aniberefo anaa akorɔmfo anaa wɔn a wɔsom ahoni. Sɛ wompɛ sɛ wo ne wɔn bɔ a, na ɛsɛ sɛ wufi wiase koraa. 11 Nea mekyerɛ ne sɛ, mommfa mo ho mmmɔ onipa a ɔfrɛ ne ho se onua nanso ɔyɛ bɔne anaa ɔyɛ oniberefo anaa ɔsom ahoni anaa ɔkɔnkɔnsani anaa ɔkɔwensani anaa ɔkorɔmfo. Onipa a ɔte saa no, mo ne no nntena ase nnto nsa nnnidi.
12 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mibu wɔn a wɔnka asafo no ho atɛn? Ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ asafo no mu mmom na ɛsɛ sɛ mubu wɔn atɛn? 13 Onyankopɔn na obebu wɔn a wonni asafo no mu atɛn, sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Munyi onipa bɔnefo no mfi mo mu.”
NA-TWI : Korintofo I 5